टोपीको सान - China Radio International
(GMT+08:00) 2018-03-21 09:56:09
जनवरी १२ तारिख अर्थात् पुष २८ गते शुक्रबार चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालय र बेइजिङ नगरपालिका जनसरकारले चीनमा बसेका विदेशी पत्रकारहरुका लागि नयाँ वर्षको भोजको आयोजना गरेको थियो। साँझ छ बजे सुरु हुने भोजमा मलाई पनि निम्ता भएकाले साँझ पाँच बजेतिर कोठाबाट निस्किएँ।
बेइजिङको जाडो निकै बढेको थियो। त्यही दिन बिहान कपाल काटेकाले मैले टोपी लगाउने बिचार गरेँ। उसो त म टोपी खासै नलगाउने मान्छे। यसो कहिलेकाहीँ दूताबासले आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रममा दौरासुरुवाल लगाएको बेला टोपी लगाएको हुँला। कपाल झरिसकेको तालु लिएर हिँड्दा नै मलाई आनन्द आउँछ। जनवरी एक तारिख अन्तर्राष्ट्रिय टोपी दिवस भन्दै साथीहरुले फेसबुकमा फोटो हाले पनि आफूलाई त्यसो गर्न कहिल्यै जाँगर चलेन। त्यो दिन चाहिँ ढोकाबाट बाहिर निस्किसकेर पनि फर्केर ढाका टोपी लगाएर गएँ। अन्य केही कारणले नभइ चिसोबाट बच्नका लागि टोपी लगाएको थिएँ। टोपी लगाएपछि टाउको सकसक गर्दै कता कता अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो।
कार्यक्रममा पुगेर यसो कोही चिनेको मान्छे भेटिन्छ कि भनेर यताउता भौँतारिँदै थिएँ कसैले मलाई नमस्ते भन्दै बोलायो। हातमा चिसो पेयको गिलास बोकेका एकजना अधवैँसे चिनियाँले हात अगाडि बढाए। उनले मुसुक्क हाँस्दै भने 'तिमी नेपाली रहेछौ। मैले टोपीबाटै चिनेँ। मेरा धेरै नेपाली साथीहरु छन्।' बेइजिङस्थित रनमिन विश्वविद्यालयका कार्यकारी डिन प्रोफेसर डा वाङ वेन रहेछन् उनी। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रमणमा आउँदा उनको रनमिन विश्वविद्यालयमा गएका थिए। त्यो अवसरमा म पनि त्यहाँ थिएँ। तर त्यतिबेला प्रोफेसर वाङसँग दोहोरो चिनजान हुन सकेन। बरु डा छन स्यावो छनसँग चाहिँ कुरा भएको थियो। प्रोफेसर वाङ वेनले टोपीको बारेमा जिज्ञासा राखे 'प्राइमिनिस्टर केपी ओलीले पनि यस्तै टोपी लगाएका थिए। के फरक हुन्छ ?' उनको प्रश्न निकै गहन थियो। मैले बनिबनाउ उत्तर दिएँ 'अरु कपडा जस्तै हो। यसको गुणस्तर र हातले बनाएका बुट्टाका आधारमा मूल्य फरक फरक पर्छ।'
त्यहाँ नेपाली ढाका टोपी लगाउने म मात्र भएर होला सबैले मेरो टोपीमा हेरेर मुस्कुराएको जस्तो लाग्थ्यो। चिनियाँ मात्र होइन भिडमा एउटी खैरेनी युवती पनि मसँग टोपीकै कारणले कुरा गर्न आइपुगिन्। उनको नाम मारिया ओए विसक्ट्रोम रहेछ। उनी बेइजिङस्थित नर्वेजियन दूताबासको संस्कृति तथा सूचना अधिकृत रहिछन्। उनका साथीहरु केही समय अगाडि नेपालमा ट्रेकिङ जाँदाको फोटो उनलाई पठाएका रहेछन्। फोटोमा उनका साथीले नेपाली ढाका टोपी लगाएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भनिन् 'त्यसपछि मैले गुगलमा नेपाली टोपीको बारेमा सर्च गरेँ। तिम्रो देशका उच्च सरकारी अधिकारीहरुले यस्तो टोपी लगाउँदा रहेछन्।'
मैले उनलाई नेपाली टोपीको महत्व दर्साउँदै हिजोआज पश्चिमा फेसनको प्रभावले धेरै नेपालीले यस्तो टोपी लगाउन छोडेको बताएँ। उनले अनौठो अनुहार बनाउँदै भनिन् 'एसियामा रहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यही हो। अरुका कुराको नक्कल गर्दा आफ्ना सम्पदाहरु नासिएका छन्।'
उनले प्रयोग गरेको 'सम्पदा' शब्दले मलाई कुत्कुत्यायो साँच्चै टोपी नेपालीहरुको सम्पदा हो त ?'
मेरो टोपी हेर्दै टाडैबाट हात हल्लाउँदै अर्का चिनियाँ कुरा गर्न आइपुगे। उनले परिचय गर्नुभन्दा अगाडि भने 'मसँग पनि यस्तै टोपी छ। मलाई ल्हासाका लागि नेपाली महावाणिज्यदूतले उपहार दिएका हुन्।' उनको नाम सु स्यावो रहेछ। चिनियाँ परराष्ट्रमन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सूचना केन्दका उपनिर्देशक पदमा कार्यरत सु चार वर्ष अगाडि चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतको ल्हासामा कुनै सरकारी पदमा काम गरेका रहेछन्। तत्कालीन नेपाली महावाणिज्यदूत हरि बस्यालले उनलाई नेपाली टोपी उपहार दिएको र त्यसलाई जतनसाथ राखेको बताउँदा मलाई नेपाली टोपीप्रति गौरववोध भयो।
त्यति मात्र होइन सु स्यावोले नेपाली टोपीको अझै व्याख्या गरे। आधुनिक चीनका प्रणेता तङ स्यावो फिङ नेपाल भ्रमणमा जाँदा नेपाली टोपी लगाएको फोटो अझै पनि चीनमा निकै लोकप्रिय रहेको बताउँदै उनले भने 'नेपालीहरुका लागि टोपीको महत्व सगरमाथाको उचाइजस्तै छ। अनि नेपाली टोपी उपहारले चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध पनि उस्तै उच्च छ।'
टोपी लगाउँदा सुरुमा भएको अप्ठ्यारो हराउँदै गयो र म दङ्ग पर्न थालेँ। त्यही भीडमा एकजना चिनियाँ महिला निकै हतारिएर आइन् र भनिन् 'पक्कै पनि यहाँ कुनै नेपाली पत्रकार भेट हुन्छ भन्ने सोचेकी थिएँ। तपाईंको टोपीबाट मैले चिनिहालेँ। मलाई तपाईंको सहयोग चाहिएको छ।' त्यसपछि बल्ल उनले आफ्नो नामकार्ड मेरो हातमा राखिदिइन्। उनी चिनियाँ पत्रकार महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभाग अन्तर्गत एसिया डिभिजनकी प्रमुख चाङ याङ रहिछन्। उनले मबाट चाहेको सहयोग चाहिँ नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल पत्रकार संघ (मंजुरत्न शाक्य)बीचमा के फरक छ र नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा यी दुई संस्थाको प्रभाव कस्तो छ भन्ने रहेछ। उनले आगामी जुलाईमा नेपाल पत्रकार महासंघको एउटा प्रतिनिधि मण्डलले चीनको भ्रमण गर्दै गरेको पनि जानकारी दिइन्।
उमेर ढल्केकी एउटी खैरेनीले 'नेपाली टोपी' भनेर उच्चारण गरिन्। जमघटमा विदेशीले टोपी भनेर उच्चारण गर्दा अचम्म नलाग्ने कुरै भएन। ५५ कटेकी ती महिला मेरो छेउमा आइन् र परिचय दिइन्। उनी बेइजिङस्थित अमेरिकी दूताबासका उपप्रवक्ता अलिज एल स्पेन्स्लेई रहिछन्। उनी मोरियार्टी नेपालका राजदूत हुँदा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूताबासमा कार्यरत रहिछन्। उनले भनिन् 'बेइजिङमा पनि यसरी नेपाली टोपी लगाएको मान्छे देख्ता मैले आफ्नो नेपालको कार्यकाल सम्झिएँ। त्यतिबेला नेपालको राजनीति सबैभन्दा तरल थियो र अमेरिकाका लागि सर्वाधिक चासोको विषय पनि थियो।' मैले मनमनै गणना गरेँ त्यो समय त माओवादी शान्ति प्रकृयामा आउने समय पो रहेछ।
भोज सकिँदा रातको साढे आठ नाघेको थियो। कुनै बेला महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मान्छेभित्र भएको गुणको होइन पोशाकको महत्व हुन्छ भनेर व्यङ्ग्य गरे जस्तै भोजमा टोपीको परिचय मेरोभन्दा बढी भएको अनुभव गर्दै म फर्किएँ।
साभारः कान्तिपुर कोसेली २०७४ फागुन १२ (२०१८ फेब्रुअरी २४) शनिबार।